Tag: codka hore | Martech Zone
Tag: codka hore
Toddobaadkaygu wuxuu ka buuxo cajalado podcast iyo wicitaannada shirarka. Waxay umuuqataa marar badan, wicitaanadaasi waxay leeyihiin dad yar oo halkaas jooga oo aan awood u lahayn inay helaan meel xasilloon. Si daacadnimo ah ayey ii waalan tahay. Gali Krisp, oo ah barxad yareysa buuqa asalka. Krisp wuxuu ku darayaa lakab dheeri ah oo udhaxeeya makarafoonkaaga / sameelahaaga iyo barnaamijyada shirarka, oo aan u oggolaanaynin wax buuq ah inuu dhex maro. Iyadoo lagu saleynayo 20,000 qaylo kala duwan, 50,000 oo ku hadla, iyo 2,500 saacadood
Talaado, September 12, 2017 Talaado, September 12, 2017 Douglas Karr
Ma jiraan wax ka sii daraya oo ka xun sidii aad guriga uga soo laaban laheyd dhacdo, oo aad madaxaaga istuudiyaha u gashato, oo aad u ogaatid inay jiraan codad badan oo asal ah oo ku saabsan duubistaada. Taasi waa wixii aniga igu dhacay. Waxaan sameeyay taxane ah duubitaan podcast ah dhacdo waxaanan doortey makarafoonada lavalier iyo duubista Zoom H6. Ma aanan haysan meel istuudiyaha u gaar ah oo aan wax ku duubno, waxaan fadhiisanay miis ka fog meelaha dadku ku badan yahay…